Cali Gurrey afar kabood oo laba-ba dhan u jeedo ayuu xidhan yay by Abdi Mustafe‏
Cali Gurrey afar kabood oo laba-ba dhan u jeedo ayuu xidhan yay by Abdi Mustafe‏ 0 July 25, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 632
Cali Gurrey afar kabood oo laba-ba dhan u jeedo ayuu xidhan yay by Abdi Mustafe‏ Cali Guurey waxaan xasuusinayaa gabaygii Qamaan Bulxan:
Baadida nin baa kula daydaya, daalna kaa badane Aan doonihayn inaad heshana daayin adbidkiiye dadkuna moodi duul wada dhashoon wax u dah-soonayne Dallo ma laha Aakhiro haddii, loo kitaab dayo e
Gurrey waayadan danbe waa lagu fahma guuraa oo wuxuu dadka uula muuqdaa
nin afar kabood oo lababa dhan eegeyso xidhan.
Laba kabood xafiiska xisbiga Ucid bay eegayaan laba na madaxtooyada ayay eegayaan. Cali
isla maalin qudha ayuu marna xukuumada ku qaad qaadayaa marna odhanayaa
mucaaridku gudihiisa islama fahansana ujeedada shirka mucaaradka oo uu shaki gelinayaa cida maamulaysa. Cali wuxuu u eegyay nin mudadii mucaardka uu ahaa ay ku dheeraatay. Abwaan Qassim wuxuu yidhi mar badhasaabkii Bidhiidh la xidhay oo ay is dacaayadeyn jireen: Haw baqan bidhiidhow sanad waa bil oo kale e.
Isku soo xoori, xisbiga UCID waxa jooga musraxiisii iyo ku xigeen kiisii hadaba Cali yaanu ka dheereynin nimankaa afarta kabood na laba ha
iska bixiyo wey ku badanyiin e.